Kahor kulanka caawa ee Derby d’Italia… halyayga reer Brazil ee Ronaldo oo ka hadlay isbar-bardhiga isaga iyo Cristiano – Gool FM
Kahor kulanka caawa ee Derby d’Italia… halyayga reer Brazil ee Ronaldo oo ka hadlay isbar-bardhiga isaga iyo Cristiano
(Serie A) 07 Dis 2018. Halyayga reer Brazil Ronaldo, ahna laacibkii hoe kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo Inter Milan ayaa wuxuu wareysi ku bixiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga kahor kulanka caawa ee Derby d’Italia ay wada ciyaari doonaan kooxaha Juventus iyo Inter Milan.
Laacibkii hore xulka qaranka Brazil Ronaldo ayaa wuxuu ugu horeyn ka hadlay arinta ku saabsan isbar-bardhiga asiga iyo xidiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, wuxuuna iska diiday in ay jirto meel ay isaga shabahaan labadooda.
“Isbar-bardhiga aniga iyo Cristiano Ronaldo waa anin iga qoslisa in badan, lakiin waxaa run ah inaan nahay laba qofood ee kala duwan, kahor wax walba waxaa jira farqi 9 sano ah ee inoo dhexeeya”.
“Waxaan kasoo muuqanay laba jiil ee kala duwan, kubada cagta si dhaqsi ah ayay isku badashay, mana doonayo inaan sheego in waqtigii hore uu fiicnaa, laakiin waxaan wajahay xaalado kala duwan”.
Si kastaba Allianz Stadium ayaa caawa oo jimco ah marti galin doona kulanka Derby d’Italia ay wada ciyaari doonaan kooxaha Juventus iyo Inter Milan, kaasoo ka tirsan kulamada 15-aad ee horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Waxaa xusid mudan in halyayga reer Brazil ee Ronaldo ayaa wuxuu kahor yimid kooxda Juventus dhamaadkii sagaashameeyada ee qarnigii tagay.
Maurizio Sarri oo qiray in Manchester City ay ka xoog badan tahay kooxdiisa Chelsea
Jorge Mendes oo ka hadlay mustaqbalka Jose Mourinho ee kooxda Manchester United